Vaky loha > Lehilahy iray 40 taona no vaky loha voadonan’ny fiara tetsy amin’ny lalana Digue Anosi-patrana, omaly alina tokony ho tamin’ny 7 ora sy sasany. Niantso ny teo anivon’ny mpa-monjy voina ireo olona teo amin’ny manodidina, ka ireto farany no nitondra azy ho eny amin’ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona.
Tsy tra-drano > Lehilahy iray 20 taona no maty tsy tra-drano notifirin’ny mpamaky trano tany Andilana-toby,ny 9 janoary teo tokony ho tamin’ny 1 ora sy sasany maraina. Rangahy iray 60 taona ihany koa no naratra mafy novonoin’ireo olon-dratsy tamin’ izany. Trano efatra no norobain’izy ireo ka en- tana maro no lasany.
Maty voatrobaky ny lefona > Lehilahy iray tompom-bady no maty notsindronin’ny rafilahiny tamin’ny lefona tany Ankodabe Antsohihy, ny 2 janoary teo. Tratran’ilay tompom-bady ambodiomby ilay rafilahiny sy ilay vadiny, ka nandray lefona izy hamonoana azy ireo, saingy izy indray no voatrobak’ilay rafilahiny tamin’izany rehefa raikitra ny fifandonana. Efa notanana ao amin’ny biraon’ny zandary ao an-toerana ilay nahavanon-doza.
Voatifitry ny dahalo > Tompon’omby iray no maty ary olona roa hafa naratra voatifitry ny dahalo tany Besely atsimo ny 9 janoary teo tokony ho tamin’ny 9 ora maraina. Omby 95 an’ity maty voatifitra ity no lasan’ireo dahalo ireo, ka nahatonga ny fanarahan-dia. Efa tafaverina avokoa ireo omby rehetra very ireo amin’izao fotoana izao.
Fianakaviamben’ny polisy > Notanterahina teny amin’ny ENSP Ivato ny fiarahabana noho ny fahatrarana ny taona vaovao teo anivon’ny fianakaviamben’ny polisim-pirenena. Isan’ny tonga nanatrika ity lanonana ity ny minisitry ny Filaminana anatiny, ny contrôleur général de police, Rakotondrazaka Arsène izay nitondra firarian-tsoa ho an’ireo polisy rehetra mane-rana ny Nosy.
Ioga – Hanara-maso ny andrana nokleary(0)
Vao nahazo fitaovana natao hanaraha-maso ireo andrana nokleary aty amin’ny manodidina antsika ny IOGA na ny ivon-toerana mpanara-maso ny fivoaran’ny tany, eny Ambohimitsimbina. «Toerana roa eto amin- tsika no hametrahana azy ireo, izay mifandray mivantana amin’ny foibe any Vienne (Aotrisy). Anisan’ireo 300 miely eran-tany. Avy amin’ireo fitaovana ireo koa no handraisantsika ireo vaovao samihafa avy amin’ireo toerana 300. Omenay ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny ny vaovao azonay. Anjarany ny mitatitra ireo vaovao ireo any amin’ireo fivoriana iraisam-pirenena handraisan’ny solontena Malagasy anjara. Avy amin’i zany koa no mety hahazoan’izay firenena manao andrana nokleary sazy na tsia», hoy Rambolamanana Gérard, talen’ny IOGA. Olana atrehin’ny IOGA ny tsy fahampian’ny vola iasany ka tsy hahafahany miasa araka ny tokony ho izy B.A Fanamparam-pahefana – Parlemantera voalaza fa namingavinga zandary(0)
Mpikambana eo anivon’ ny Kaongresin’ny tetezamita iray no voalaza fa namingavinga zandary nanao ny asany tamin’iny lalam-pirenena fahafito iny, ny alakamisy 23 mey teo. Tao amin’ny distrikan’Antani-fotsy no nisehoan’ity tranga ity, araka ny tatitry ny mpitandro ny filaminana. Mpianatra ho zandary avy amin’ny sekolin’ny zanda-rimariam-pirenena any Moramanga manao fizaran- draharaha miaraka amin’ireo mpitarika azy no sendra ity manam-pahefana ity. « Nibahan-dalana ny fiaran’ ilay mpikambana eo anivon’ ny Kaongresin’ny tetezamita ka nasain’ilay mpianatra ho zandary iray esorina. Avy hatrany anefa dia teny tsy voahevitra no navalin’ ilay parlemantera », hoy ny tatitry ny zandarimaria. Nampanantsoina tany amin’ny borigadin’ny zanda- rimaria ao Antsirabe ity mpikambana eo anivon’ny Kaongresin’ny tetezamita ity. Maminiaina Andri.
Voatifitra > Miaramilan’ny DAS iray no naratra voatifitry ny dahalo teo amin’ny ranjony, tany Fihao-nana Tsiroanomandidy, ny 23 mey teo tokony ho tamin’ny 6 ora sy sasany hariva. Nanara-dia dahalo avy nanga-latra omby 30 ity miara- mila ity izao voatifitra izao. Nentina avy hatrany tao amin’ny tobim-pahasalamana tao Tsiroanomandidy ny tenany. Lozam-pifamoi-voizana > Telo mianaka nandeha an-tongotra teny amin’ny arabe no naratra nofaohin’ny môtô tany Ambatofotsy ny 23 mey teo, tokony ho tamin’ny 8 ora sy sasany maraina. Nentina namonjy toe-ram-pitsaboana tao Behenjy izy telo mianaka ireo. Asan-dahalo > Malaso efatra nirongo basim-borona no nandroba omby 15 tao Imanja any amin’ny faritra Menabe, ny 22 mey teo tokony ho tamin’ny 5 ora sy sasany maraina. Niafara tamin’ ny fifandonana tamin’ ireo olon-dratsy ny fana- rahan-dia natao, ka tafaverina ny 14 tamin’ ireo omby ary ny iray kosa novonoin’ny dahalo.
FJKM Ambohitantely – Namangy ny fianakaviana Andriamanjato ny kaominina(0)
Delegasiona mafonja no tonga teny amin’ny fiangonana Fjkm Ambohitantely, omaly maraina, niara-niondrika nanoloana ny vatana mangatsiakan’ny pasitera Andri-amanjato Richard. Ny filohan’ny delegasiona manokan’ ny tanànan’Antananarivo, Razafindravahy Edgard, no nitarika izany. Tazana teny ihany koa ny filohan’ny filankevitra monisipaly, Ranaivoarimanga Salohy. Taorian’ny teny fisaorana nataon’ireo fianakaviana dia nanao tsiahy fohifohy ny mombamomba an-drainy Ny Hasina Andriamanjato. Ny fampihavanana ny vahoaka mala- gasy amin’Andriamanitra izay tena nilofosan’ny pasitera hatramin’ny fahavelony no isan’ny nasongadiny. Teo amin’ ny lafiny politika indray dia isan’ireo zandriny indrindra ny tenany satria vao 29 taona monja dia efa Ben’ny tanàn’ Antananarivo. Hatramin’ny fotoana naha mpitandrina azy dia teny Ambohitantely hatrany no nipetraka ny pasitera Andriamanjato Richard na dia tsy mpitandrina nitondra ny fiangonana intsony aza. «Hamangy ny zanany sy ny zafiny no nandehanany tany Frantsa kinanjo izao izy maty tampoka izao», hoy ireo fianakaviana. Ranaivoson Faniry Bongolava – Jiolahy 70 nanafika, telo matin’ny fokonolona (0)
Jiolahy 70 lahy teo no nanafika ny tanànan’i Kiranomena, any amin’ny faritra Bongo-lava, omaly vao mangiran-dratsy tamin’ny 6 ora maraina, raha ny voalazan’ny loharanom-baovao iray avy any an-toerana. Tanàna misy tobin’ny zandarimaria i Kiranomena. Tsy nanaiky lembenana anefa ny tao an-tanàna fa niaro tena. Vokatry ny fifandonana dia telo tamin’ireo jiolahy no matin’ny fokonolona. Nentin’ ireo namany nitsoaka ny fatin’ireo namany roa lahy, fa ny iray no tavela teo. Nisy naratra madi-nidinika tamin’ireo mponina sahy nifandona tamin’ireo olon-dratsy fa tsy nisy ny aina nafoy, hoy ihany ny loharanom-baovao izay nohamafisin’ny zandarimaria. Barphil Andriantsiferanarivo
Tapatapany, Mpanoratra Rijakely, 12.01.2013, 10:20	FIARAHAMONINA